Somali Version | Program in Health Disparities Research - University of Minnesota
Adkeysiga dhallinyaradu muxuu ugu fadhiyaa ardayda dugsiyada sare ee Twin Cities-ka? Sannadkii 2010-kii, waxaa isku yimid koox ka kooban xubno bulshada ka tirsan, bareyaal iyo cilmi-baareyaal si ay uga jawaabaan su’aashaas oo laga eegayay dhanka mowqifka dhallinyarada Soomaalida, Laatiinada iyo Hmong-ka. Ardaydii ay wareeysteen waxay tilmaameen siyaabaha ay macallimiintu ugu muujin karaan ardayda inay aqoon u leeyihiin oo qaddarin u hayaan. Waxay ardaydu yidhaahdeen:
“Waxaan iskuulkayaga ku qabanaa munaasabadda Sannadka Cusub ee Hmong-ka, waxayna macallimiinta qaarkood oo aan Hmong ahayn noogu yimaadaan inay na taageeraan, way iska yimaadaan si ay u taageeraan iyagoo daawada oo dhiirri-galiya ciyaarta.” (Da’ yar Hmong ah)
“…wuxuu igu canaananayay inaanan ka soo bixin hawsheeydii laakiin wuxuu waqti galiyay inuu si dhab ah ii fahansiiyo waxa aan sameeynayay iyo inuu i tuso waxa la iga rabay inaan sameeyo, waxaanan arkay inay faa’iido badneeyd inuu i caawiyo intii uu ii dhiibi lahaa warqad laga soo shaqeeynayo.” (Da' yar Laatiino)
“Waxay kuu muujinayaan ixtiraam. Haddii aad wax caawinaad ah u baahatid, way kula fadhiisanayaan si ay kuula hadlaan, waxayna ku odhanayaan waxan ayaad sameeysay waxaanan jecelahay inaad akhlaaq wanaag ku joogto iskuulka waayo iskuulku meel ayuu ku gaadhsiinayaa.” (Da’ yar Soomaaliyeed)
Mashruuca TRUST (Tababarka Adkeeysiga ee Ardayda iyo Macallimiinta Magaalooyinka) wuxuu ka dhashay fikradaha ardaydaas.
Waa maxay Mashruuca TRUST?
Iskaashi cilmi-baaris oo ay ka wada shaqeeyeen xubnaha bulshada ee Isbahaysiga SoLaHmo ee Caafimaadka iyo Ladnaanta, bareyaal ka socda SPPS, iyo aqoonyahanno ka socda Kulliyadda Caafimaadka ee Jaamacadda Minnesota iyo Kulliyadda Waxbarashada iyo Horumarinta Aadanaha si ay u sameeyaan una qiimeeyaan barnaamij 9 qaybood ah oo lagu kobcinayo xirfadaha macallimiinta.
Mashruuca TRUST waxaa maal-geliyay Machadka Qaranka ee Caafimaadka.
Hadafku wuxuu yahay in la kobciyo adkeeysiga ardayda fasalka 9aad ee Soomaalida, Laatiinada iyo Hmong-ka iyadoo la xoojinayo xidhiidhka ay ardaydu la leeyihiin macallimiinta iyo iskuulkooda. Waxaan fileeynay in dhammaan ardaydu ay faa’iidi doonaan markii ay macallimiintodu ka qeeyb qaataan Mashruuca TRUST.
Maxay ku xidhnaanta macallimiinta iyo iskuulku muhiim ugu yihiin caafimaadka iyo aflaxaadda cilmiyeed?
Cilmi-baaris hore ayaa noo sheegaysa in ardayda xidhiidhka xooggan la leh macallimiintooda iyo iskuulladooda ay helaan darajo sare, waxayna sidoo kale leeyihiin dabeecado caafimaadka u wanaagsan waxaana ku yar dabeecadaha caafimaadka waxyeela sida isticmaalka tubaakada, khamriga iyo maandooriyaha.
Dhammeeystirka dugsiga sare ayaa ka mid ah tilmaamaha ugu muhiimsan ee caafimaadka bulsheed.
Saddex sano oo cilmi-baaris ah oo ay ka qeeyb galeen waalidiin, dhallinyaro iyo bareyaal ayaa nagu hoggaamiyay 9-ka mawduuc oo noqday qeybaha barnaamijka kobcinta xirfadaha macallimiinta.
Halwadeenada Mashruuca TRUST ayaa kala shaqeeyay macallimiinta Como inay dhaqan-geliyaan oo kobciyaan xirfadahooda ku aaddan sidii ay xidhiidh qiimo leh ula sameeysan lahaayeen dhallinyarada.
Mashruuca TRUST wuxuu macallimiinta u kordhiyay fahankooda ku aaddan kaalinta muhiimka ah ee ay ku leeyihiin korriinada wanaagsan ee ardaydooda, waxayna is-weeydaarsadeen aqoon iyagoo isdhaafsanayay xeeladaha lagu dhiso xidhiidhka macallimiinta iyo ardayda.
Maxaan ka baraney?
214 arday oo fasalka 9aad ka dhigta Como ayaa aqbalay, iyagoo oggolaansho ka haysta waalidkood, inay buuxiyaan sahan ku saabsan jawiga fasaladooda.
Guud ahaan, waxay ardaydu sheegeen sannadka bilowgiisii inay xidhiidh xooggan la leeyihiin macallimiintooda iyo inay si buuxda uga qeeyb qaadanayeen fasalladooda.
Ardayda ay macallimiintoodu ka qeyb galeen Mashruuca TRUST isma uusan baddalin dareenkooda ku-xidhnaanta ah sannadkii oo dhan.
Ardayda ay macallimiintoodu ka qeyb galeen Mashruuca TRUST hoos uma dhicin himilooyinkoodii iyo hadafyadoodii mustaqbalka intii uu sannadku socday.
Waxaa hoos u dhacay dareenkii ku-xidhnaanta, himilooyinkii iyo hadafyadii mustaqbalka ee ardayda aan macallimiintoodu ka qeyb qaadan TRUST.
Maxay macallimiintu ka sheegeen Mashruuca TRUST?
“Xil-saarka ah inaan la hadlo arday aanan sida caadiga ah la hadlin, ardaygaasi hadda mar walba wuxuu iigu yimaadaa inuu ila sheekeeysto.”
“Waxaa jirtay dhibaato khaas ah oo iga haysatay mid ka mid ah ardayda oo (Mashruuca TRUST) iga caawiyay…Waxaan garowsaday inaan u baahnaa inaan samirka badiyo. Waxaa ii suuro gashay inaan tuso siduu horumar u sameeyn lahaa waanan ka degay…aad ayuu u soo fiicnaaday.”
“Ku dara dhismaha iskuulka si taageero loogu helo. Waxaan sameeyn karnaa oo kaliya in yar oo halkan ah iyo in yar oo halkaas ah waligeenna ma arkayno wax isbadal ah.”
Maxay tahay tallaabada xigta ee Mashruuca TRUST?
Waxaan Machadka Caafimaadka ee Qaranka u qoranay codsi kale oo deeq ah waxaanan rajeeynaynaa inaan Mashruuca TRUST ka fulino Twin Cities-ka oo dhan.